Ichere Godot: eserese nke na -egosi enweghị uche mmadụ. Akwụkwọ ugbu a
Juan Ortiz | 16/09/2021 00:48 | Emelitere ka 16/09/2021 01:18 | Ndị edemede, Akwụkwọ, Aterlọ ihe nkiri
Na-eche Godot (1948) bụ egwuregwu ihe nkiri nzuzu nke onye Irishman Samuel Beckett dere. N'ime akwụkwọ edemede niile edepụtara, "Tragicomedy na omume abụọ" - dịka e siri depụta ya n'okpuru isiokwu - bụ ederede nwere ama ama n'ụwa niile. Ọ dị mma ịmara na ọ bụ ibe ahụ webatara Beckett na mbara igwe ihe nkiri, wee nweta ya onyinye nrite Nobel na 1969.
Eziokwu na -atọ ụtọ bụ na Beckett - onye na -anụ ọkụ n'obi n'asụsụ na onye na -ahụ maka ọdịmma mmadụ - jiri asụsụ French dee ọrụ a. Ọ bụghị n'efu n'akwụkwọ a nke aha E bipụtara ya n'okpuru akara na-asụ French Les Éditions de Minuit, afọ anọ ka edechara ya (1952). Na-eche Godot malitere na ogbo na Jenụwarị 5, 1953, na Paris.
1 Nchịkọta nke ọrụ ahụ
1.1 Ihe mbụ
1.1.1 Godot: ihe kpatara echere
1.1.2 Ọbịbịa Pozzo na Lucky
1.1.3 Ozi na -akụda mmụọ nke na -eme ka nchere ahụ dịkwuo ogologo
1.2 Omume nke abụọ
1.2.1 Nlaghachi na mgbanwe siri ike
2 Na -eche nyocha Gogdot
2.1 Ikike nke ịdị mfe
2.2 Ihe ọ bụla merenụ, ọ nweghị ihe ga -agbanwe ọdịnihu ụmụ mmadụ
2.3 Godot abụghị Chineke ...
2.4 Ndụ: akaghị
3 Nkwupụta sitere n'aka ndị nkatọ pụrụiche na Ichere Godot
4 Na -eche Godot trivia
5 Ichere akpaokwu Godot
Nchịkọta nke ọrụ ahụ
Beckett kewara ọrụ ahụ n'ụzọ dị mfe: na omume abụọ.
N'akụkụ a, nkata ahụ na -egosi Vladimir na Estragon na -abịarute na ogbo nke 'Ụzọ dị n'ọhịa dere. Osisi. - A na -echekwa ihe ndị a n'oge ọrụ- Otu ehihie. " Ndị na -agụ akụkọ na -eji ejiji dị mkpụmkpụ na enweghị isi, nke na -eme ka o doo anya na ha nwere ike ịbụ ọnya, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe doro anya mara banyere ha. Ebe ha siri bịa, ihe mere n'oge gara aga ha na ihe kpatara ha ji eji ejiji dị ka nke a bụ ihe omimi zuru oke.
Godot: ihe kpatara echere
Ihe amara n'ezie, na ọrụ dịịrị ime ka amara ya nke ọma, ọ bụ ya ha na -eche maka "Godot."". Ọ dịghị onye maaraAgbanyeghị, ederede na -enye agwa agwa a nwere ike idozi ihe isi ike nke ndị na -eche ya.
Ọbịbịa Pozzo na Lucky
Ka ha na -eche onye na -abịabeghị, Didi na Gogo - dịka amakwaara ndị na -akwado ya - mkparịta ụka mgbe mkparịta ụka na -awagharị na -enweghị isi wee mikpuo n'ihe efu nke "ịbụ". Obere oge gachara, Pozzo - onye nwe na onye nwe ebe ha na -eje ije, dị ka ya si kwuo - na nwa odibo ya Lucky sonyere na nchere.
nke ọma na -adọta dị ka onye anya isi bara ọgaranya. Mgbe ọ bịarutere, ọ na-emesi ike ya ike ma na-anwa igosipụta njide onwe onye na ntụkwasị obi. Agbanyeghị, ka oge na -agba ọkụ na asịrị, ọ na -apụtakwu nke ọma na - dị ka ndị ọzọ na -agụ akụkọ - nwoke nwere nde ego nọ n'otu nsogbu ahụ: ọ maghị ihe kpatara ya ma ọ bụ ihe kpatara ịdị adị ya. Kechioma, N'aka nke ya, ọ bụ onye na -edo onwe ya n'okpuru ma dabere, ohu.
Ozi na -akụda mmụọ nke na -eme ka nchere ahụ dịkwuo ogologo
Mgbe ụbọchị ahụ ga -agwụ na -enweghị ihe gosiri na Godot ga -abata, ihe a na -atụghị anya ya mere: nwatakiri pụtara. Nke a na -abịaru nso ebe Pozzo, Lucky, Gogo na Didi na -awagharị y na -agwa ha na, Ee ọ dị mma Godot anaghị abịa, Ọ bụ nnọọ puru omume mee ngosi ụbọchị na-esote.
Vladimir na Estragon, Ka akụkọ ahụ gachara, ha kwetara ịlaghachi n'ụtụtụ. Ha anaghị ada mbà na atụmatụ ha: ọ dị ha mkpa, n'agbanyeghị ihe ọ bụla, izute Godot.
Omume nke abụọ
Dị nnọọ ka e kwuru, otu ihe ahụ ka dị. Osisi ahụ, nke nwere alaka gbara ọchịchịrị, na -anwale nke ukwuu ka e wee jiri ya mee ihe na -akwụsị ike ọgwụgwụ na usoro ihe omume. Didi na Gogo laghachiri ebe ahụ wee kwughachi ihe ọjọọ ha. Otú ọ dị, ihe dị iche na -eme n'ihe gbasara ụbọchị gara aga, nke ahụ bụ na ha na -amalite ịchọpụta na e nwere ụnyaahụ, ebe ihe gosiri na ha nọ pụtara.
Ị nwere ike ikwu okwu mgbe ahụ nke nsụhọ nwa oge, ọ bụ ezie na, na omume, a na -emegharị ihe niile; ụdị "Day Groundhog."
Nlaghachi na mgbanwe siri ike
Kechioma na onye nwe ya laghachiri, otu o sila dị, ha nọ n’ọnọdụ dị nnọọ iche. Ohu ahụ dara ogbi ugbu a, Pozzo na -enwekwa ìsì. N'okpuru mgbanwe mgbanwe a dị egwu, olileanya nke mbata na -adịgide, ya na mkparịta ụka enweghị isi, enweghị isi, foto nke enweghị uche nke ndụ.
Dị ka ụbọchị gara aga, onye ozi nta ahụ na -alaghachi. Otú ọ dị,, mgbe Didi na Gogo jụrụ ya ajụjụ, the nwa gọrọ na ya na ha nọrọ ụnyaahụ. Kedu ee ikwugharị ọzọ bụ otu akụkọ: Godot agaghị abịa taa, mana ọ ga -ekwe omume na echi ọ ga -abịa.
Ihe odide ha na -ahụ ibe ha ọzọ, na n'etiti ndakpọ olileanya na ịkwa ụta, Ha kwetara ịlaghachi n'echi ya. Osisi nke owu na -ama ka nọchiri anya igbu onwe ya dịka ụzọ mgbapụ; Vladimir na Estragon hụrụ ya wee chee maka ya, mana ha na -eche ịhụ ihe "echi" ga -eweta.
Wayzọ a ọrụ rụchaa, na -enye ụzọ ihe nwere ike ịbụ akaghị.
Nyocha nke Na -eche Gogdot
Na-eche Godot, n'onwe ya, ọ bụ ntaramahụhụ na -adọta anyị ihe bụ ụbọchị ụbọchị mmadụ. Nkịtị dị n'omume abụọ nke ederede —Ewezuga otu ma ọ bụ ọzọ mgbanwe oge ụfọdụ- bụ ikwughachi ugboro ugboro nke ahụ anaghị eme ihe ọ bụla karịa igosi ije na -enweghị mgbagha nke onye ọ bụla, site na nzọ ụkwụ, ruo ili ya.
Ikike nke ịdị mfe
Ọ dị n'ịdị mfe nke ọrụ ahụ, n'agbanyeghị na ọ dị ka cliché, ebe ikike ya dị, ebe akụ na ụba ya dị: eserese na bọọdụ ndị na -egosi enweghị uche nke gbara mmadụ gburugburu.
Ọ bụ ezie na Godot-onye a na-atụ anya ya, nke a na-atụ anya ya-anaghị apụta ma ọlị, ọnụnọ ya na-egosi onwe ya maka ọdachi nke nzuzu nke ịdị adị mmadụ. Oge na ogbo na -enweta ihe kpatara ya site n'omume ndị, n'agbanyeghị na ha yiri ihe na -enweghị isi, agaghị adị mma ma ọ bụ ka njọ karịa ndị ọzọ, n'ihi na onye a na -atụ anya ya, n'otu aka ahụ, agaghị abịa.
Ihe ọ bụla merenụ, ọ nweghị ihe ga -agbanwe ọdịnihu ụmụ mmadụ
N'egwuregwu ahụ ọ bụ otu ihe ịchị ọchị ma ọ bụ ibe akwa, iku ume ma ọ bụ na ọ bụghị, lee ka ehihie na -anwụ ma ọ bụ osisi akpọnwụ, ma ọ bụ bụrụ nke nwere osisi na odida obodo. NA ọ nweghị nke ga -agbanwe ọdịnihu pụrụ iche: ọbịbịa nke adịghị adị.
Godot abụghị Chineke ...
Ọ bụ ezie na n'ime afọ niile, e nweela ndị na -ekwu na Godot bụ Chineke n'onwe ya, Beckett gọrọ agọ dị otú ahụ. Ọ dị mma, n'agbanyeghị na ha na -ejikọ ya n'eziokwu na mmadụ na -eche chi ruo n'ọdịbendị dị iche iche, na -eji ndapụta dị mfe na okwu Anglo. Chukwu, eziokwu bụ na onye dere gosiri nke ahụ aha ahụ sitere na olu francophone godilot, ya bụ: "buut", n'asụsụ Spanish. Ya mere, gịnị ka Didi na Gogo tụrụ anya ya? N'efu, olileanya mmadụ na -agbakwasị ụkwụ na -ejighị n'aka.
Ọzọkwa Enweela ndị jikọtara onye ozi Godot na mesaịa nke omenala ndị Judeo-Christian, na e nwere mgbagha n'ebe ahụ. Mana n'iburu n'uche ihe onye edemede kwuru, a na -atụfu ozizi a.
Ọgwụgwụ ahụ enweghị ike ịka mma na ihe ndị ọzọ etolitere n'ọrụ, n'ezie. Yabụ ịlaghachi na mbido, mana ị matara na ị bụ, na e nwere nchere ụnyaahụ, dị ka ma ọ bụ karịa ọbara karịa taa, mana ọ dịghị ihe na -erughị echi. Na onye na -ekwu na ọ ga -abịarịrị gọrọ agọ na o kwuru na ọ kwuru ụnyaahụ, mana na -ekwe nkwa na ọ nwere ike ime echi ... na ihe ndị ọzọ, ruo ume ikpeazụ.
Nkwupụta sitere n'aka ndị nkatọ pụrụ iche na Na-eche Godot
«Ọ dịghị ihe na -eme, ugboro abụọ", Vivian Mercier kwuru.
“Ọ dịghị ihe na -eme, ọ nweghị onye na -abịa, ọ nweghị onye na -aga, ọ dị egwu!", Amaghị ama, mgbe emechara ya na Paris na 1953.
"Na-eche Godot, dị adị karịa ihe nzuzu". Mayelit Valera Arvelo
Ọchịchọ nke Na-eche Godot
Onye nkatọ Kenneth burke, mgbe m hụchara egwuregwu ahụ, O kwuru na njikọ dị n'etiti El Gordo na El Flaco yiri nke Vladimir na Estragon. Nke bụ ihe ezi uche dị na ya, ebe ọ maara na Beckett bụ onye na -akwado ya Abụba na akpịrị.
N'etiti ọtụtụ mmalite nke aha ahụ, enwere otu na -ekwu ọ mere Beckett mgbe ọ na -ekpori ndụ na Tour de France. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na agbụrụ ahụ akwụsịla, ndị mmadụ ka na -eche. Samuel ọ jụrụ, sị: "Onye ka ị na -eche?" na, n'egbughị oge, ha zara ndị na -ege ntị "Nye Godot!" Nkebi ahịrịokwu ahụ zoro aka na onye asọmpi a hapụrụ na onye na -abịa.
Ihe odide niile Ha na-ebu okpu nke bowler okpu. Na nke a abụghị ihe ndabara Beckett bụ onye na -akwado Chaplin, ya mere ọ bụ ụzọ o si kwanyere ya ugwu. Ma ọ bụ na ọrụ ahụ enwere ọtụtụ sinima na -agbachi nkịtị, ọtụtụ ihe ahụ na -ekwu, ihe ọ na -egosipụta, na -enweghị mgbochi, ịgbachi nkịtị. Banyere nke a, onye ntụzi ihe nkiri Alfredo Sanzol kwupụtara na N'ajụjụ ọnụ ya El País si Spain:
“Ọ bụ ihe ọchị, ọ na -akọwapụta na Vladimir na Estragon na -eyi okpu bowler na ọ bụ ya mere na nhazi niile, ha na -eyi okpu bowler. Ana m eguzogide. Nke bụ eziokwu bụ na m nwara okpu na ụdị okpu ndị ọzọ, mana ha arụghị ọrụ. Ruo mgbe m nyere iwu otu ụzọ bọọlụ na, n'ezie, ha ga -eyi bọọlụ. Okpu bọọlụ bụ Chaplin, ma ọ bụ na Spain, Coll. Ha na -akpalite ọtụtụ ndị nnọchiteanya. Ọ bụ ahụmahụ na -eweda m ala. "
Mgbe Na-eche Godot ọ bụ mbuso agha mbụ nke Bekett n'ime ụlọ ihe nkiri, enwere mbọ ugboro abụọ nke emezughị. Otu n'ime ha bụ egwuregwu gbasara Samuel Johnson. Nke ọzọ bụ Eleutheria, mana ewepụrụ ya mgbe Godot pụtara.
Okwu nke Na-eche Godot
“Anyị edobela ọkwa anyị, nke ahụ bụ naanị. Anyị abụghị ndị nsọ, mana anyị debere ọkwa anyị. Mmadụ ole ga -ekwu otu ihe ahụ?
“Anya mmiri nke ụwa anaghị agbanwe agbanwe. Maka onye ọ bụla malitere ibe ákwá, n'akụkụ nke ọzọ enwere onye na -akwụsị ime ya ".
“Ana m echeta maapụ ala nsọ ahụ. Na agba. Ọ dị oke mma. Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ na -acha anụnụ anụnụ. Akpịrị kpọrọ m nkụ na -ele ya. Ọ gwara m: anyị ga -aga ebe ahụ ka anyị nọrọ ezumike ezumike anyị. Anyị ga -egwu mmiri. Anyị ga -enwe obi ụtọ ".
“VLADIMIR: Site na nke a anyị gafere oge. ESTRAGON: Ọ ga -abụrịrị otu ihe ahụ. VLADIMIR: Ee, mana obere ngwa ngwa ”.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Aterlọ ihe nkiri » Na-eche Godot
Christie Agatha. Afọ ncheta ọmụmụ ya. Nhọrọ akpaokwu